ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက် - ဖြစ်ဒုက္ခသည်များအတွက်ကောင်းသောလုပ်ခလစာနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ & ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ | USAHello | USAHello
ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက် - ဖြစ်ဒုက္ခသည်များအတွက်ကောင်းသောလုပ်ခလစာနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ & ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ
သွားဆရာဝန်လက်ထောက်အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျော်ကြားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်. အလုပ်ကလုံခြုံရေးများကိုပေးစွမ်းကြောင့်လုပ်သားအင်အားထဲသို့မဝင်ရရန်လွယ်ကူသည်. လူတွေကိုပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့အံသွားကိုဂရုစိုက်ကူညီပေးဖို့သွားလက်ထောက်. ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူ X-ray သို့မဟုတ်အကူအညီနဲ့ဆရာယူပြီးအချိန်ဇယားဆွဲချိန်းအဖြစ်ဖျော်ဖြေတာဝန်များကို. သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်အများအပြားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှသတိထားရမှာ. ဤဆောင်းပါး၌အလုပ်နှင့်လစာများအတွက်ယေဘုယျမျှော်လင့်ချက်များပေါ်တွင်သင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်. ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျကိုလည်းမှတ်ပုံတင်သွားလက်ထောက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုသင်ယူပါလိမ့်မယ်.
သူတို့ကသွားဆရာဝန်နှင့်ရုံးဝန်ထမ်းကိုထောကျပံ့. သွားဆရာဝန်လက်ထောက်လူနာအချိန်ဇယားဘို့ချိန်းဆုံးဖြတ်သည်နှင့်လူနာမှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းထား. သူသို့မဟုတ်သူမလူနာကုသနေစဉ်သွားဆရာဝန်ကိုကူညီပေးခြင်း. သူတို့က tools တွေတိုးများနှင့် X-Ray ပုံများ, လူနာယူပါ။ သူတို့ကသေချာစိတ်သက်သာရာကြောင်းအောင်.
အများစုကသွားလက်ထောက်အများအပြားဆရာသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းသာရုံးရှိစေခြင်းငှါသူတစ်ဦးသွားဆရာဝန်အလုပ်လုပ်. ဆရာပိုကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှိရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာကိုအခြားပါးစပ်တွင်းအလုပ်, လုပ်ဖို့သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်.
မှတ်ပုံတင်သွားဆရာဝန်လက်ထောက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖြစ်လာနိုင်သလား. သငျသညျလူတို့သည်မိမိတို့အံသွားကိုဂရုစိုက်ကူညီခြင်းနှင့်အကောင်းတစ်ဝင်ငွေရနိုင်. အလုပ်သမားစာရင်းအင်းဗျူရိုရဲ့အဆိုအရမေလ 2014 ခုနှစ်အဖြစ်, ပါးစပ်တွင်းလက်ထောက်၏ပျှမ်းမျှနှစ်စဉ်လစာထောက်ပံ့ပေး 39090 $.
ကူညီပေးခြင်းဆရာနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေတဲ့အလုပ်အကိုင်များများထဲမှ. ဝယ်လိုအားကြီးထွားဖို့ကိုဆက်လက်ဦးမည်, ဤအခန်းကဏ္ဍဖြည့်ဖို့လူမှဆရာတောင်းမည်.
New Hampshire, အရှေ့ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်မြောက်ဖက်
ခက်ခဲကျွမ်းကျင်မှု: စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း, X-ray နှင့်ပါးစပ်တွင်းပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း.
soft ကျွမ်းကျင်မှု: သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်ဆရာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အတူဘေးချင်းယှဉ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ရှိရမည်. သူတို့ကလူနာနှင့်အတူပညာရှင်ပီသစွာနဲ့ညင်ညင်သာသာဆက်သွယ်ပြောဆိုရမယ်. ဒါကဒါခေါ်နေသည် “လမ်းကုလားထိုင်” ကောင်းသော.
ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု ဒါဟာမဆိုအလုပ်၌ကြီးစွာသောချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ပါသည်! ကန့်သတ်အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူလူနာတွေအများကြီးမြင်သောသွားဘက်ဆိုင်ရာရုံးများ. သင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလူနာဆကျသှယျကူညီခြင်းနှင့်အဆင်ပြေခံစားရပေမည်.
အနည်းငယ်ပြည်နယ်များတရားဝင်လိုင်စင်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူးနေစဉ်. ဒါဟာပါးစပ်တွင်းအကူအညီအစီအစဉ်မှယူနိုင်ပါသည်9လက်မှတ်သို့မဟုတ်ဒီပလိုမာသို့မဟုတ်လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုရှိမရှိအပေါ်မူတည်ပြီးမြောက်ရန်နှစ်နှစ်မှလ,.
များသောအားဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်စေရပ်ရွာသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကောလိပ်လက်ထောက်ကျောင်းကအစီအစဉ်တွင်မှတ်ပုံတင်သွားဆရာဝန်ဖြည့်စွက်. စာသင်ခန်း၌ဆုံးမဩဝါဒများအပြင်၌, အစီအစဉ်များအများစုနေတဲ့လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လက်တွေ့ကျတဲ့သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများပေး. ပုံမှန်အားဖြင့်ကသင်တန်းများလည်းပါဝင်သည်:
လက်မှတ်နှင့်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်အခြေအနေမှကွဲပြား. ဘယ်မှာလိုအပ်သောလက်မှတ်နိုင်ငံတွေမှာတော့များသောအားဖြင့်ကျောင်းသားများသွားလက်ထောက်လက်မှတ်စာမေးပွဲ (CDA). စမ်းသပ်မှုစင်တာများတွင်ကျင်းပသောစာမေးပွဲအတွက်ဒါက 320-ပြဿနာ “Pearson Vue” ဒါဟာအောက်ပါဒြပ်စင်များပါဝင်သည်:
10 – တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး၏စောင့်ကြည့်ခြင်း
ဘယ်လို Start မှ
ပထမဦးစွာပြည်နယ်ယန္တရားနှင့်ကိုသွားစေခြင်းငှါကျောင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုရှာဖွေသုတေသနပြု. သငျသညျတခါအလုံအလောက်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်, သင်အဘို့အညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေနိုင်သည်. သငျသညျကောလိပ်မှလျှောက်ထားခြင်းအတွက်အကူအညီလိုရှိလျှင်, ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ. အဘယ်သို့ငါကောလိပ်ကျောင်းလျှောက်ထားသလဲ?
ဒါဟာအနာဂတျအတှကျစီစဉျထားရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါသွားဘက်ဆိုင်ရာပညာရေး, စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်. သွားကိုကူညီပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်ပမာဏကနေအထိ, ပြည်နယ်မှပြည်နယ်မှအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည် 850 သို့ 7560 ဒေါ်လာစျေး. ဒါဟာတချို့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောစာမေးပွဲ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်ဖြည့်စွက်ဓာတ်ခွဲခန်းအခကြေးငွေနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအဖြစ်အပိုဆောင်းကြေးဖြစ်ကြ၏ရှိနိုင်ပါသည်.
သင့်ရဲ့ဒိုမိန်းအတွက်ဝန်ခံချက်နှင့်ကျူရှင်စရိတ်၏ကုန်ကျစရိတ်သင်ယူဖို့ရာအတွက်ကျောင်းတက်သုတေသန. သွားဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီ၏ကောလိပ်စျေးကြီးဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ကြောင်းကိုသင်၏အိပ်မက်ရရှိထံမှသင်တို့ကိုရပ်တန့်မသွားပါစေပါဘူး. သင်သည်သင်၏ပညာရေးငွေကြေးနိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်:
သင်ကစတင်နိုင်ပါသည်သောပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုမှာသင့်ရဲ့ငွေစုမှ. သင်လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကြောငျးအတှကျပိုက်ဆံချွေတာစတင်နိုင်ပါသည်.
ပညာသင်ဆုများကိုလည်းသင်၏အပညာရေးငွေကြေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း. သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းစစျဆေးနိုငျ ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအဘို့အပညာသင်ဆုများ ဆိုက် RCO တွင်. သင်လေ့လာသင်ယူလိုကူညီပေးနိုငျသောဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် အဆိုပါအကယ်ဒမီသို့မဟုတ်လူဝင်မှုဒုက္ခသည်အတွက်အောင်မြင်ဖို့လုပ်နည်း.
သငျသညျပညာသင်ဆုရှာဖွေနေပါသလား? သင်ကြား ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအဘို့အပညာသင်ဆုများ
ကျနော်တို့စတင်ရန်အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာမလိုအပ်? သင်တန်းအွန်လိုင်း GED ကိုယူMjana®
တစ်ဦးပါးစပ်တွင်းလက်ထောက်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါ (များအတွက် connector https://www.danb.org/Become-Certified/Exams-and-Certifications/CDA.aspx)
သင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အတွက်လစာနှင့်အခြားကိန်းဂဏန်းများသွားလက်ထောက် (https ကိုမှ Link ကို://www.bls.gov/oes/current/oes319091.htm